ငါ့birdက မှားတာပါ Kyaung Kyaung | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Opinion - Op-ed » ငါ့birdက မှားတာပါ Kyaung Kyaung
Posted by ဦးကြောင်ကြီး on Jun 23, 2015 in Opinion - Op-ed | 13 comments
မြန်တျန့်ပြည်မှာ ကျောင်းသား၊ အလှုပ်သမား၊ လယ်သမားဒွေ လမ်းပေါ်ထွက် ဆန္ဒပြမှာကို ကြောက်သူတွေ အတော်ရှိသဗျ။ ယေဘူယျနှစ်ပိုင်းခွဲလျင်တော့စစ်တပ်အုပ်စိုးမှုကို ထောက်ခံသူ၊ သူတို့နဲ့ အလွမ်းသင့်သူတွေနဲ့ ဒီမိုကိုထောက်ခံပြီး ခွင်မိနေသူ၊ ခွင်ရိုက်နေသူတွေ ပေါ့ဗျာ။ ဒါလည်း အပျစ်ပြောရ ခက်သားလား… လူဆိုဒါ ငါ့တဖို့ အတ္တသမားတွေလေ..။ နားလည်ပေးနိုင်ပါတယ်။။ ကိုယ်တွေ့ဗျ… ကိုယ်တွေ့.. ပလို့ဂျိ…။
၂၀၀၅ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာနှော်င်းပိုင်းတုံးဂ နယူးယောက်စီးတီးမှာ ရထားနဲ့ဘွတ်စကား မောင်းသမားတွေ လုပ်ခလစာ တိုးတောင်းတာ မရလို့ အလုပ်မဆင်း သပိတ်မှောက်တယ်။ ရထား၊ကားစီး အလုပ်သွားသူတွေ သန်းနဲ့ချီ ဂန့်ကုန်တာပေါ့။ သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးဘုတ်အဖွဲ့ကလည်း မြို့ဒေါ်ဝံ ဦးဆောင်ပြီး တင်းခံတယ်။ ၃ရက်နီးပါးကြာတယ်၊ နောက်တော့သပိတ်လှန်လိုက်ရတယ်။ အလုပ်သမားသမဂ္ဂ ခေါင်းဆောင်တွေ နှုတ်ထွက်ပေးရတယ်။ အဲဒီတုံးက အနိမ့်ဆုံးလုပ်ခက တနာရီ ၅ဒေါ်လာ ၁၅ဆင့်ထင်တယ်။ အဲလောက်ကိုတောင် တပတ်နာရီလေးဆယ်ပြည့် မရသူတွေ အများကြီး။ အင်းမီးဂရန့်တွေ အများစုပေါ့ဗျာ.. အဖြူ မတွေ့ဘူးပါဘူး.. အမဲ၊ ပဲနဲ့ အေးရှန်းတွေ ချည်းပါပဲ။ စာစီတာ နောက်ဆုံးက အေးရှန်းဆိုတော့မြင်ကြည့်ပေါ့… အေးရှန်းမှာမှ မြန်တျန့်က အာဆီယံမှာတောင် အောက်ဆုံးဆိုတော့ကြက်ဥကြော်တွေ၊ မျိုးခြစ်အရည်ခြုံတွေ၊ ဘာသာရေး အယောင်ဆောင်တွေ ကိုယ့်အခြေအနေ ကိုယ်သိဂျပေါ့.. ဟိုဒင်း ဒေါ်မဲသွပ်တော့မပါဘူး.. သူက တဖက်ပိတ် ငါမှန် နင်မှားဂျီး…။
အဲဒီ သပိတ်မှောက် အမ်တီအေ သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး ဝန်ထမ်းတွေကြတော့ လခ၊ခံစားခွင့် အကုန်ကောင်းသဗျ.. အင်းမီဂရန့်အလုပ်တွေနဲ့ ယှဉ်ရင်ပေါ့ဗျာ။ သူတို့အခြင်းခြင်းတော့နိမ့်လို့ ဆန္ဒပြတာပေါ့။ သူတို့တွေက အနိမ့်ဆုံးတောင် အဲဒီအချိန် တနာရီ ၁၃ကျပ်လောက် ရတယ်ထင်တယ်။ ကျန်းမာရေးအာမခံ၊ ရုံးပိတ်ရက်၊ အားလပ်ရက်ရှည်ခွင့်.. ပြောစရာမလို၊ ဒါကို နည်းတယ်ဆိုပြီး ဆန္ဒပြတော့လက်လုပ်လက်စား အာဝါးဒါး ကျုပ်တို့လို လူတွေ ဝိုင်းဆဲတာပေါ့။ ဟုတ်တယ်လေ သူတို့ရတာ ကိုယ်ရမှာမှ မဟုတ်တာ။ မြို့တော်ဝန်ကလည်း အောက်ခြေလူတန်းစားတွေ ဒွတ်ခရောက်နေပြီ၊ တနေ့လုပ်မှ တနေ့စား မင်းတို့ ရထား၊ကားမဆွဲတော့သူတို့ဘယ်လို ထမင်းစားမလည်း ကြပ်ပေးတယ်။ တဖက်ကလည်း ပုဂ္ဂလိက အလုပ်ရှင်တွေကို အေးဆေးနေဖို့ ပြောထားတယ်။ အလုပ်ရှင်ဆိုတဲ့ အမျိုးကလည်း ဒါကြတော့သူတို့ဖက်ပါ လှည့်လာ တိုးတောင်းမှာဆိုးလို့ အလုပ်သမားတွေကို အလုပ်တက် နောက်ကျတာ ပြသနာ မရှာဘူး။ တွေ့ရာကားစီး၊ သပိတ်မှောက် ရထားအဖွဲ့နဲ့ မဆိုင်တဲ့ မြို့ပြင်က ရထားလာရင် တိုးဝှေ့စီး (လက်မှတ်ခ မပေးရဘူးဂျ၊ လက်မှတ်တောင်းလည်း ဝူးဝါးဝူးဝါး လုပ်ပစ်လိုက်တယ်) တရက်ကနေ နှစ်ရက်၊ သုံးရက်လည်းကြာရော လူတွေ ဝိုင်းဆဲတာနဲ့ သပ်ိတ်လှန်ပေးရရော။
ဘယ်သူမှား၊ မှန်က တပိုင်း.. ပြောချဉ်တာက လူတွေရဲ့ ကိုယ်ကျိုးစီးပွား ကြည့်မှုအပိုင်း။ အမ်တီအေက အလုပ်သမားတွေက များသောအားဖြင့် ယူအက်စ်မှာမွေး ယူအက်စ်မှာကြီးသူ (သို့မဟုတ်) အနေကြာသူ များတယ်။ အလုပ်ရှားနေချိန်မှာ အဲဒီအလုပ်က ကိုယ့်လယ်ဗယ်ခြင်းတော့ ဗိုလ်ပဲ။ လွယ်လွယ်နဲ့ ဝင်တိုးလို့မရ။ တနေရာ လစ်ရင် အယောက်တရာ ချောင်းနေတဲ့ အလုပ်မျိုး။ ကိုယ့်ထက်မြင့်နေသူတွေက လုပ်ခနည်းလို့ တောင်းတော့မစာနာဘူးဗျ။ သူမလုပ်နိုင် အောက်ဈေးနဲ့ ဝင်ဖို့ ချောင်းနေသူချည်းပဲ။ ကိုလိုနီခေတ်က ကလား ဆန်ထမ်းသမားတွေ လုပ်ခတိုးတောင်းဖို့ သပိတ်မှောက်တော့လမ်းမတော်ဖိုးတုပ်က အလုပ်လက်မဲ့ ဗမာတွေကို ပေးတဲ့ဈေးနဲ့ ဝင်လုပ်ခိုင်းသလို မြင်ကြည့်ပေါ့။
နှစ်နည်းနည်းကြာလို့ ကိုယ်က အဲဒီနေရာမျိုးလည်း ရောက်ရော… ကိုယ့်အတွက်တော့ရွှေထုပ်ကြီးဗျ… ဒီတော့အလုပ်တွင်း ဆူဆူပူပူ လုပ်မည့်ကောင်ဆို မကြိုက်ခြင်၊မတော်လို့ ကိုယ်ပါရော ပြုတ်ရင် အခုလို ပြန်ရဖို့မလွယ်လေ။ နည်းနည်းပိုကြာတော့တော်ရုံမပြုတ်မှန်းသိတော့ဘာဖြစ်ပြန်သလဲဆို ကိုယ့်တုံးကလို အောက်ဈေးနှိုက်မည့်ကောင်၊ ပေးသမျှနဲ့ ကျေနပ်နေမည့်ကောင်ကို မုန်းရပြန်ရော။ ဒင်းတို့ ရှိနေလို့ လခ မတက်တော့ တာ..။ ကိုယ်ပိုင် အလုပ်ဆိုလည်း ဆိုင်လေး၊ ခွင်လေးမိထားသူက ကိုယ်တိုင်ပဲခံစားကြည့်ပေါ့.. ရင်းနှီးထားတာလေး ပြုတ်မှာ ပူနေရသဗျ။ အဲဒါကို ဒို့အရေးလုပ်ကြစို့ ဘယ်လောက်အော်အော်.. ကိုယ့်ရှေ့မှာ ဘယ်လောက် မတရားတာဖြစ်နေပါစေ.. ငါ့ဟာ ငါ့ဟာ ဆိတ်က ဖုံးနေသဗျ။ ပါးစပ်ကတော့ဆင်ခြေ အမျိုးမျိုး ပြတာပေါ့လေ။ ပြောလို့ကုန်ရင် အော်တဲ့ကောင်တွေ ကို အပုပ်ချ… နာမည်ဖျက်ပေါ့။
သူများအကြောင်း မပြောဘူး..ကိုယ့်ဖာသာကိုယ် ဝေဖန်မယ်။ ရောက်ခါစများ ရုတ်ရုတ် ရုတ်ရုတ်လုပ်ဖို့ မကြောက်ပါ၊ ပြန်ပို့လည်း သောက်ခွီးပဲ။ အဲဒုံးကများ အစိုးရနဲ့မတည့်တဲ့ ACLU လို civil rights အဖွဲ့ဆန္ဒပြရင် လက်ခုပ်လက်ဝါးတီးဖို့ ဝန်မလေး။ ခုလို အသက်လေးနည်းနည်းရ ဗိုက်ခေါက်ပိုထူလာတော့ဆန္ဒပြပွဲ သွားကြည့်ဖို့ မပြောနဲ့ သူတို့ဝက်ဘ်ဆိုက်တော့မတက်ရဲတော့ ။ အက်ဖ်ဘီအိုင်ထောက်လှမ်းရေးက ပြောရတာ မဟုတ်ဘူး.. ပတ်စ်ပို့သိမ်း အိမ်ပြန်ပို့.. မွေ့ယာအောက်ထည့် ဖွက်ထားတဲ့ ပိုက်ဆံလေးပါ ငွေမည်းဆိုပီး သိမ်းလိုက်မှဖြင့်… အောင်မငှီး…။
အခုလည်း ဗကသကျောင်းသားတွေ ဆန္ဒပြမှာကို ထောက်ခံမိလို့ ပြောလိုက်ကြတာ… ယဆရာမရှိ..။ ဝဋ် ဆိုတာ မဆိုင်း၊ ဒီဘဝတင် လည်တာ အမှန်ပဲ။ ငါကိုယ်က မကောင်းတာပါ၊ သူများကို လုပ်ခဲ့တော့ငါ့အလှည့် ပြန်တီးမည့်သူ ပေါ်တယ်။ ဒင်းရို့ ပြောနိုင်ဆိုနိုင် ကဲ့ရဲ့ပြစ်တင် ပျက်ရယ်ပြုနိုင်ကြပါစေ။ ရွှေလမ်းငွေလမ်း ဝံငွေလမ်းဖြောင့်လို့ သားယေး သမီးယေး အိန်ထောင်ရေး ဖွမ်ရေး ဒေါ်လာရေး အိမ်မြေယာခြံရေး အောင်မြင်ကြီးပွားဂျပါစေ..။ ကားအစင်းရာထောင်ချီပိုင်ပြီး ဂွင်တွေမိလို့ ဟိုတယ်ဂျီးတွေ မိုးမျှော်တိုက်လောက်ဆောက်ပြီး စတိုးဆိုင်၊ဆေးဆိုင် အစုံအလင်နဲ့ ပွဲရုံ၊ အထည်ချုပ်ပါမကျန် ပျော်နိုင်မော်နိုင် ကြွားနိုင်ဝါနိုင်ကြပါစေ….။ ဒေါ်လာစားနဲ့ လခကောင်းနေသူတွေလည်း သပိတ်ဝံအိတ်ဝံ စုနိုင်ဆောင်းနိုင် သုံးဖြုံးပျော်ပါးနိုင်ကြပါစေ…။ အမြှ အမြှ…. ကြောင်ကြီးရေ အားလုံး မင်းအပျစ်တွေ ချီးပါကွာ… ဘွတ်..။ https://youtu.be/w2NebNG1-Qs
မင်း မမှားဘူး… ငါမှန်တယ်
အတော် လာ တဲ့ ကြောင် ကြောင်။
ခုလို အသက်လေးနည်းနည်းရ ဗိုက်ခေါက်ပိုထူလာတော့ …..
ကလေးတွေကို ဓားစားခံလုပ်ပြီး စန်ဒပြဖို့ လှုံ့ဆော်တုန်း :b:
ဆီအိုင်အွေ ရှိူ့ဝီ့ ဆိတ်ဓါတ်ဆစ်ဆင်ရေး မြန်မာပြည်အူးကြောင်က
ရွာရဲ့ တခုခုတော့ တခုခုဖြစ်နေပါလားလို့…။ ။ ဆိုတော့
ဆိုတော့.. အပြောအဆို ဆင်ခြင်ရတော့မယ်..။ ။
အညင်မှန်ရတွားပြီလား။ အခုတော့လဲ တနားချာလေး။
နို ပါနဲ့ ကြောင်ကြောင်ရယ်။
အများနဲ့ တစ်ကောင် အမျင် မတူပေမဲ့ သများတို့က တရောဇင်ကြီးကြပါတယ်။
. ဂျစ်ကြောင်ကြောင်လေး ကို ချီးယား ပေးကြစို့။
အားလုံး ဝိုင်းဖွဲ့ ဆိုကြရအောင်လား။
ရယ် ဒီ ဝမ်း – တူး – သရီး
နည်းနည်းလေးဂျစ်တာ မလောက်လို့ များများကြီး ဂျစ် ပါဦးလို့
ဒီလိုပြောတဲ့ အခြစ်ကို တို့က နာမည်လေး တစ်ခု ပေးမယ် (ကြောင်င်င် လား)
စကားလေးများပြောရင် ခြစ်လို့ ပြောတိုင်းဘဲ အမြဲပါတတ်လို့
ဒီလို ဂျစ်တဲ့ အခြစ်ကို တို့က နာမည်လေး တစ်ခု ပေးမယ် (ကြောင်င်င် လား)
အများကြီးဘဲ ဂျစ်နေသားနဲ့ နည်းနည်းလေး ဂျစ်တယ်ပြော
ဒီလို ဆိုးတဲ့ ခြစ်သူလေးမို့ နာမည်လေး တစ်ခု ပေးချင်သား။
နည်းနည်းလေး ဂျစ် ရင်လဲ မလောက် များများကြီး ဂျစ်ရင်လဲ မလောက်
ဒီလို ဂျစ်တဲ့ အခြစ်ကို တို့က နာမည်တစ်ခုတော့ ပေးမယ် (ကြောင်င်င် လား)
ကိုကိုခြစ် ရေ့ ဒီလိုဘဲ တို့ကတော့ ခေါ်မှာဘဲကွယ်
ထာဝစဉ်လေ မင်းကြိုက်သလို ဂျစ်မယ် မင်းကြိုက်သလို ဂျစ်မယ် ခြစ်တယ်
(ကိုကိုခြစ် ရေ ကိုကိုခြစ် ရေ ) :-)))))
ဟက်ပီ သွားပြီလား ကြောင်ကြောင်လေး ရေ။
No Worry …. Be Happy …
. ပြောသာပြောရတာပါ။ ဝါရီ မရှိဘဲ ဟက်ပီ ဖြစ်ဖို့ က ဗိုက်ဆာ နေလို့မရဘူး။
ဗိုက်မဆာဖို့ ဝယ်စားနိုင်မဲ့ ပိုက်ဆံ ရှိမှ ဖြစ်မယ်။
အဲဒီ အတွက် အလုပ်လုပ်ရမယ်။
အလုပ်လုပ်နိုင်ဖို့ အလုပ်တွေ ရှိရမယ်။
အလုပ် တွေ ရှိဖို့ အလုပ်ပေးနိုင်မဲ့ လုပ်ငန်းရှင် တွေ ရှိရမယ်။
ဒါကြောင့် ဘူဇွာခေါ်ခေါ်၊ အရင်းရှင်ခေါ်ခေါ် စီးပွါးရေး အကွက်မြင်တဲ့ ချမ်းသာသူတွေ များတာ ပြသနာမဟုတ်ပါဘူး။
. ပြသနာက လူတစ်စု တစ်ဖွဲ့ ကဘဲ စိတ်ထင်သလို လက်ဝါးကြီးအုပ် ခေါင်းပုံမဖြတ်နိုင်အောင် ဥပဒေကောင်းကောင်း က စီးထားဖို့ပါဘဲ။
အခုနောက်ပိုင်း ဟားဗတ်တို့လို ကျောင်းကြီးတွေက ဘွဲ့ ပေးတဲ့ အခမ်းအနား တွေမှာဆို နွမ်းပါးနိမ့်ကျသူတွေ ကို ကူညီမြှင့်တင်ပေးတတ် တဲ့ စိတ်၊ ကိုယ်ချင်းစာစိတ် ရှိဖို့ တွေ အတော်ပြောလာကြတာ။
အဲဒီလို ချမ်းသာသူတွေ၊ ပညာတတ်သူတွေ ထဲ လူသားချင်းစာနာတတ် တဲ့ စံပြပုဂ္ဂိုလ် တွေ များသထက်များလာပြီး လို ဖြစ်သွားချိန် ကမ္ဘာကြီး က အတော်နေပျော်သွားမှာပါ။
ဒီတော့ ချမ်းသာသူ လုပ်ငန်းရှင်များ ကို မျက်စိစပါးမွေး မစူးစမ်းပါနဲ့ ကြောင်ကြောင်ရာ။
သူတို့ တွေ မြန်မာနိုင်ငံမှာ အများကြီး ရှိသင့်ပါတယ်။
ဒါမှ အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်းပေါမှာပါ။
ဘက်တစ်ခုထဲ က ကြည့်ပြီးတော့ ဘယ်ဟာ က အမှား ဘယ်ဟာက အမှန် ပြောဖို့ ခက်ပါတယ်။
သူ့ဘက် က ကြည့် ရင် သူ့ဟာသူမှန်သလို၊ ကိုယ့်ဘက်ကလဲ ကိုယ့်ဟာကို မှန်နေတာကိုး။
ဒီတော့ အမှန်ဆုံး ကို လိုချင်ရင် ဘယ်ဘက်မှာမှ မနေဘဲ က နေ ခုန် ထွက်ပြီး ကြည့်ပါ ကြောင်ကြောင်။
မဟုတ်ရင် အမှား တွေ နဲ့ နစ် နေတတ်တယ်။
ဟယ် …. ကြောင်ကြောင်
သများ က ဆူတာ ဝုတ်ဘူး။
ရွာသူ/သား တို့ ရေ။ လာကြပါဦး။
ကိုကိုခြစ် လေး နောက်တစ်ကျော့ လောက်။
(ကိုကိုခြစ် ရေ ကိုကိုခြစ် ရေ )
အဲဒီထဲ တင့်တင့်ထွန်း ကတာ တအားလှတယ်။ အခုတော့ ဆရာလေးဖြစ်ပြီး အေးချမ်းနေပြီ။ :-))
ဒီမှာလည်း ဆန္ဒပြကြတဲ့ အခါ နှစ်ပိုင်းမက သုံးပိုင်းကွဲနေပါတယ်။
တကယ်ကို ပြင်းထန်တဲ့ ယုံကြည်ချက်နဲ့ လုပ်သူ
သူများလာခေါ်တာနဲ့ ဟေးလား ၀ါးလား ပါသွားသူ
မငြိမ်သက်ပါဘူးလို့ ပြောနိုင်အောင် ငွေပေးပြီးဆန္ဒပြခိုင်း တော့ နေ့စား ဆန္ဒပြသူ
အရင်လို သိပ်မလုပ်တော့ မှန်းသိချင်လို့ နိုင်ငံရေးအမြတ်ထုတ်ပြီးထင်ပေါ်ချင်သူ
ဖွချင်တဲ့ မီဒီယာများနဲ့ ဇာတ်လမ်းဆင်ပြီး ဆန္ဒပြတဲ့သူ
အူးကြောင်… ဘယ်သူမှားမှား မနော မမှားဖို့လိုတယ်..
မှားတဲ့Bird တွေ.. အရှင်လတ်လတ်ကင်စားခံရဖို့သာပြင်…။
မကင်စားပဲ ဥပေက္ခာပြုသူများ.. ငရဲပြည် ၃ထပ်တွင် ကမ္ဘာ၃ကပ်စာနေရမည်…။
ဂလောက် လူ အလုပ်လုပ်ချင်ရင်လည်း
ဝင်ငွေခွန် အရင် ကောက် ကြ စို့ လားလို့။
တကယ်တော့ လူမျိုး ကို ဖြစ်ဖြစ် ၊ ဘာသာကို ဖြစ်ဖြစ် အကြောင်းပြပြီး မဲဆွယ် လို့လဲ မရပါ၊ မဲ မပေးခိုင်းဖို့ လှုံ့ဆော် လို့လဲ မရပါ။
လုပ်ရင် ထောင်ဒါဏ်၊ ငွေဒါဏ် နဲ့ အပြစ်ပေးခံရမယ်လို့ ပြည်သူ့လွှတ်တော်ရွေးကောက်ပွဲ ဥပဒေ ထဲ ပါတယ်။ (စာမျက်နှာ – ၄၃ နဲ့ ၅၃)
ဒါပေမဲ့ ဥပဒေ အထက် မှာ အဝါရောင် တွေ ကို ကြိုးဆွဲထားတဲ့ အစိမ်းရောင်များ ရှိနေတယ်။
ဒါကို သိနေတယ်၊ ကြားနေတယ်၊ မြင်နေတယ်။
ညီညီညွတ်ညွတ် နဲ့ နဲနဲလေး စိတ်ဝင်တစားထား အားစိုက်နိုင်ပါမှ ဒီ အရိပ်တွေ အောက်က လွတ်မယ်ပါ့။
ဒီတစ်ခါမှ အခွင့်မရလို့ မစီး နိုင်ကြ ရင်လဲ …..